Dowlada Itobiya & Jabhadda Oromada OLF oo heshiis Ku gaaray Asmara |
Dowlada Itobiya & Jabhadda Oromada OLF oo heshiis Ku gaaray Asmara
Dowladda Itoobiya iyo Jabhadda Mucaaradka Oromada ee OLF ayaa heshiis ku gaadhay Caasimada Asmara ee dalka Eritrea, halkaasoo saldhig u ahaa jabdaha mucaaradka ee ku kacsanaa dowladda Itoobiya halkaas oo saldhig u ahaa jabhadaha mucaaradka ku ah dalka Itoobiya . Jabhadahaas oo mudo dheer ku sugnaa dalkaas ayaa isbedelkii ka dhacay labada dal ee Itoobiya Iyo Eratria ayaa sababay heshiiskaan iyo is afgaradyo ka horeeyey uu kulan kaaanu gabgabo u ahaa iyo in heshiisyo lagu kala saxiixdo. Maadaama uu kazoo Jeedo Raysalwasaare Abiy Ahmed Qoomiyadaha mid ka mid ah .
Guddoomiyaha Jabhadda OLF Daauud Ibsa ayaa u sheegay BBC-da in wixii hadda ka dambeeya ay si nabad ah ku wadi doonaan howlahooda siyaasadeed ee gudaha dalka Itoobiya.
Waxaa uu sheegay inay dib ugu laaban doonaan dalka Itoobiya, isla markaana ay joojiyeen colaadii iyo Jabhadayntii , haatanna u soo jeesteen dhanka nabadda iyo isdhexgalka bulshada ka shaqeeyaan maadaama heshiis laga gaaray colaadii.
Baarlamaanka Itoobiya ayaa bishii hore ka saaray liiska Argagixisada Jabhadda OLF iyo Jabhado kale oo horay Itoobiya ku dartay liiska Argagixisada.
Is bedelada ka dhacay dalka Itoobiya ee uu hormuudka u yahay Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sababay in dowladda ay bedesho hab dhaqanadii adkaa ee ka dhanka ah Mucaaradka iyo dadka ka soo horjeeda dowladda Itoobiya.